Tantara: Nijanona ny Masoandro - Tranonkala Ofisialin’ny Vavolombelon’i Jehovah
Nandeha avy hatrany i Josoa sy ny lehilahy mpanaﬁka rehetra. Nandeha an-tongotra nandritra ny alina manontolo izy. Rehefa tonga tao Gibeona izy ireo, ny miaramilan’ny mpanjaka dimy dia natahotra ary nanomboka nandositra. Avy eo dia nataon’i Jehovah izay hisian’ny havandra vaventy nilatsaka avy tany an-danitra, ary maro kokoa ny miaramila matin’ny havandra noho izay novonoin’ireo lehilahy mpanaﬁk’i Josoa.
Mbola maro kokoa noho ireo ny mpanjaka ratsy tao Kanana izay nankahala ny vahoakan’Andriamanitra. Nila enin-taona i Josoa sy ny taﬁny mba handresena mpanjaka 31 tao amin’ilay tany. Rehefa vita izany, dia nataon’i Josoa izay hizarana ny tany Kanana amin’ireo foko mbola nila faritany.
Firy ny mpanjaka resin’i Josoa, ary nila ﬁry taona izy mba handresena ireo fahavalony ireo?
Iza ankehitriny no misakana ny ﬁelezan’ny ﬁvadiham-pinoana, toy ny nataon’i Josoa tany Israely? (Mpits. 2:8, 10, 11; Matio 24:45-47; 2 Tes. 2:3-6; Tit. 1:7-9; Apok. 1:1; 2:1, 2)